Monday September 03, 2018 - 17:18:31 in Wararka by Super Admin
Sarkaal ka tirsan guutada loo yaqaano GSU ee taabacsan ciidamada Police-ka ee dowlada Kenya ayaa sheegay inaanu hal gaari ka harin gaadiidkii gaashamaanaa ee uu soo iibiyey madaxweynaha dalkaas Uhuru Kenyatta sanadkii 2016-kii.
Gaadiidkan oo gaarayey illaa 30 gaari ayaa dhamaantood lagu burburiyey qaraxyada miinooyinka ee ay Xarakada Al-Shabaab ka fuliso gobollada Lamu iyo N.F.D sida uu tibaaxayo sarkaalka.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in gaadiidka oo isugu jiro kuwa lagu burburiyey qaraxyada iyo kuwa ay waxyeello soo gaartay balse wuxuu sheegay in kuwa waxyeelloobay qudhoodu ay noqdeen gaadiid howlgab ah maadama isbeer baartiskooda uusan aallin wadanka.
Arrintan oo in muddo ah ay qarinayeen saraakiisha sar sare ee ciidanka ayaa banaanka timid markii todobaadkii la soo dhaafay ugu yaraan 20 askari oo ka tirsan ciidamada Booliska Kenya lagu dilay weerar dhabagal ah oo ay Al shabaab ka fuliyeen gobolka Lamu.
Warbaahinta dalka Kenya waxay sheegeysaa in ugu yaraan 32 askari oo isugu jira Police iyo military lagu dilay wadada isku xirta Laamu iyo Libooya sanadkan oo kaliya taas oo ah inta ay xukuumadu qiratay.
waxay saraakiishu sheegayaan in dhammaan weeraradaas loo adeegsaday qaraxyada miinooyinka kuwaas oo halis geliyey nolosha ciidamada ka howlgala deegaanadaasi.
Ciidamada ka howlgala xuduudaha waxay sheegayaan in lagu qasbay in ay ku roondeeyaan gaadiidka Toyota Land Cruisers iyo kuwa loo yaqaano Isuzu FTS kuwaas oo ah gaadiid u nugul qaraxyada miinooyinka.
Gaadiidkii koobnaa ee laga soo iibiyey shiinaha ayaa noqday kuwa bug ah oo aanan lahayn tayadii lagu sheegayey sida ay ilo wareedyo u sheegeen shabakada qortay warbixintan waxayna sheegayaan in mid ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee NV4 ee uu shiinuhu sameeyo uu bool bool u kala faniinay markii qarax xoogan lagula eegtay gobolka Mandheera.
Ilo wareedyo gudaha ah oo ay soo xiganeyso shabakadan ayaa sheegay in dowladda Kenya ay heshiis la gashay shiinaha si loogu sameeyo gaadiid gaashaaman oo tayo leh balse ay markii dambe dowladu bixin weysay qarashkii ku bixi lahaa gaadiidkaas taas oo keentay in shiinuhu uu ka soo iibiyo gaadiid badiil ah oo u dhigma lacagta ay bixiyeen.
"Lacagta aan dhiibnay ayaan ku filnaan weysay gaadiidka orginalka ah ee aan rabnay” ayuu yiri sarkaal la hadlay wargeyska la yiraahdo ‘Nairobian’ ee ka soo baxa caasimada dalka Kenya.
Shabakadu waxay leedahay madaxda sarsare ee ciidanka GSU ee ku raaxeysanaya xafiisyadooda xilli ay askartoodu ku roondeynayaan howdka, waxay xitaa qariyaan gaadiidka ciidanka ee lala eegto qaraxyada, mana ogola xitaa in sawiradooda la arko, waana taas sababta maanta aysan warbaahinta Kenya u heynin hal sawir oo ka mid ah gaadiidkaasi.
"Gaadiidkii gaashaannaa ee ay soo iibiyeen billowgii dagaalka aan la galnay Soomaalida waxay noqdeen kuwa burburay, iyo kuwo waxyeello soo gaartay oo howlgab ah sabab ku aadan dayactir la’aan iyo inaanan loo heynin wax isbeer ah, sidaas darteed waxaan hadda u noqonay Land Cruisers-kii iyo BG-yadii, Ciidamadii lala eegtay qaraxii Libooya ee dhacay bishii May waxaa lala eegtay ciidamo la socday gaari Land Kuruusar ah waxaana lagu dilay sideed askari, midkii ugu dambeeyeyna waxaa lala eegtay ciidamo la socday gaari Isuzu ah” ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidamada GSU oo ka hadlayey qarowga ku heysta deegaanada xaduud beenaadka.
Ciidamada Al Shabaab ee ka howlgala gobolada la heysto ee Lamu iyo N.F.D ayaa labadii sano ee ugu dambeeyey kala gaabiyey isu socodka iyo dhaq-dhaqaaqa ciidamada Kenya ee ka howlgala xad-beenaadka kadib markii ay cadowga ku beegsadeen goob waliba oo ay ku arkaan iyo wadda waliba oo uu ku safrayo, wuxuuna Allaah gacmahooda barakeysan ku cadaabay boqolaal ka mid ah saliibiyiinta qabsatay dhulalka Muslimiinta.